Boxe : handray fifaninanana iraisam-pirenena i Dago | NewsMada
Boxe : handray fifaninanana iraisam-pirenena i Dago
Ho feno ny fandaharam-potoan’ny taranja ady totohondry amin’ity taom-pilalaovana 2016 ity. Ankoatra ireo hetsika nasionaly mahazatra, toy ny fifaninanana rezionaly sy fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, sns, eo ihany koa ireo fifaninanana iraisam-pirenena isan-tokony hatrehintsika. Anisan’izany fiadiana ny tompondakan’i Afrika sy ireo fifaninanana fisokajiana olympika, sns.
Tsy izay ihany anefa, fa handray fifaninanana iraisam-pirenena i Madagasikara eo amin’ny taranja ady totohondry. Raha ny fanazavana mantsy, hankalaza ny faha-110 taona nidiran’ity taranja ity teto Madagasikara ny federasiona malagasy (FMBO) tarihin’ny filohany, Rabarisoa Hery Mamy, sy ny ekipany amin’ity taona 2016 ity. Voalaza fa niditra teto Madagasikara voalohany ny taranja ady totohondry ny taona 1906.
Araka izany, hetsika iraisam-pirenena goavana ahitana ny fandraisana anjaran’ireo firenena aty amin’ny ranomasimbe Indianina sy ireo firenena vahiny hafa, toa an’i Algérie, Maraoka, Afrika Atsimo, Rosia, sns, anjara izany. Mialoha io anefa, hiatrika ny fifaninanana nasionaly ireo mpikatroka ka amin’ny alalan’izany no handrafetan’ny federasiona ny ekipa nasionaly amin’ireo hetsika iraisam-pirenena isan-tokony ireo.